सेरोफेरो : November 2013
तस्बिरले बदलेको जिन्दगी
फागुन ५, २०६२ साल । कान्तिपुर दैनिक र काठमाडौं पोष्टको पहिलो पृष्ठमा एउटा तस्बिर छापियो । फोटो थियो, नोबेल एकेडेमी नयाँ वानेश्वरको । विद्यालयको कम्पाउन्ड भित्र विद्यार्थीहरूले विहानीको शारिरीक अभ्यास गरिरहेका थिए । त्यसै बेला विद्यालय पछाडीको थोरै भत्केको पर्खाल बाहिरैबाट ५ वर्षे एक बालक त्यो अभ्यासको सिको गर्दै थिए ।
साढे सात वर्ष अघि । कान्तिपुरका फोटो पत्रकार शालीग्राम तिवारीले खिचेको सो तस्बिर छापिए लगत्तै एकेडेमी बोर्डको बैठक बस्यो । वैठकले बालकलाई सोही स्कुलमा छात्रवृत्तीमा पढाउने निर्णय ग¥यो । ती बालक को हुन ? कसरी त्यहाँ आए ? त्यती बेलासम्म कसैलाई यसको पत्तो भने थिएन । पत्रकार तिवारी र स्कुल आफैले पनि बालकको खोजी गर्न थाले ।
‘लौ भुन्टुको फोटो निकालेचौं नी’ घरबेटीले यसो भन्दै आएपछि निर्मल चौलागाइ र उनकी श्रीमती सीता दंग परे । उनीहरू नोबेल एकेडेमीकै पछाडी पट्टी रहेको एक घरको सानो कोठामा डेरा गरि बस्थे । तस्बिरमा अनुहार नदेखिए पनि उनीहरूले कान्छो छोरो निरोजलाई पछाडीबाट नचिन्ने कुरै भएन । यसरी एकाएक पत्रिकामा छोरोको तस्बिर छापिएपछि अब के होला भन्ने कौतुहलता उनीहरूमा त्यो दिन धेरै बेर सम्म रहिरह्यो ।
काभ्रेपलान्चोक पोखरी चौरी–८ स्थाइ घर भएका निर्मल त्यतीबेला काठमाडौंमै चियापत्तीको व्यापार गर्थे । न्युरोडबाट खुला चियापत्ती ल्याउँथे र पसल–पसलमा बेच्थे । उनकी श्रीमती सीता बानेश्वरमै फलफूलको व्यापार गर्थिन् । कामको खोजीमा राजधानी पसेका उनीहरूले ९ वर्षे जेठो छोरो निरनलाई नजिकैको न्यु साइरन एकेडेमीमा भर्ना गरेका थिए । दाई निरन स्कुल जाने बेलामा ५ वर्षे भाइ निरोज पनि हत्तारिन्थे रे । ‘भात देउ, भात देउ स्कुल सुरु हुन लाओ,’ निरोजले त्यतीबेला यसै भन्ने गरेको आमा सीता सम्झिन्छिन् । खानापछि दाई आफ्नै स्कुल जान्थे । निरोज भने डेराकै पारीपट्टी देखिने नोबेलको शारिरीक अभ्यास हेर्दै उफ्रन्थ्यो ।
at November 15, 2013 No comments:
जहाजका यात्रुहरु किन हाँसे
पुस २२ गते। शनिबारको साँझ। पाँच बजेर २० मिनेट गएको थियो। विराटनगर एरपोर्टबाट यति एयरको विमान काठमाडौं उड्नेबित्तिकै एकाएक सबै यात्रु ह...
के गर्नु सर म्यानेज्मेन्ट नै यस्तै छ...
भवसागर घिमिरे नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लाजिम्पाट शाखामा (नारायणहिटीको उत्तर ढोका तर्फ) पैसा जम्मा गर्न केहि दिन अघि पुगेको थिएँ। सोच्न...
देखेपछि, सोचेपछि, गरेपछि...
हरेक दिन सडकमा उसको बिरामी हालत देख्दा दिक्क हुन्थेँ । के गर्ने भन्ने सोच्थेँ । हिजो बिहिबार साँझ तरकारी किनेर फर्कदा श्रीमतीसँगको स...
डियर जाडो, आइ हेट यु
डियर जाडो, अब तिमी डियर हुन छाडेकी छौं । तिमीसँग सम्बन्ध बिच्छेद गर्न मैले के के गरिन् ? चार हजारको जकेट किने । पन्जा, मोजा, टोपी...
घरमा जहान केटाकेटी छन् सर...
गएको महिना । बिराटनगरबाट काठमाडौं फर्कने क्रममा हाटबजार पसेँ । मलाई हाट बजारको माहोल निक्कै मन पर्छ । स्थानीय उत्पादन, आहा मन यसै लोभिन्...
Blog Archive May 2018 (1) February 2018 (4) December 2017 (4) October 2017 (1) September 2017 (3) June 2017 (1) April 2017 (1) December 2016 (1) November 2016 (2) October 2016 (2) August 2016 (1) July 2016 (1) June 2016 (1) May 2016 (3) April 2016 (1) March 2016 (3) February 2016 (1) December 2015 (6) November 2015 (5) October 2015 (1) September 2015 (4) August 2015 (1) July 2015 (1) June 2015 (2) April 2015 (1) March 2015 (2) February 2015 (1) August 2014 (2) June 2014 (3) February 2014 (1) January 2014 (2) December 2013 (1) November 2013 (1) October 2013 (2) September 2013 (4) August 2013 (1) July 2013 (6) May 2013 (4) April 2013 (2) March 2013 (7) January 2013 (2) August 2012 (1) May 2012 (3) December 2011 (3) November 2011 (2) September 2011 (1) July 2011 (6) June 2011 (2) May 2011 (4) April 2011 (2) March 2011 (7) February 2011 (9) January 2011 (13) December 2010 (2) August 2010 (1) December 2009 (1) November 2009 (1) October 2009 (1) September 2009 (6) August 2009 (1) July 2009 (6) April 2009 (5) March 2009 (35)
रम्दै जीन्दगीसँग,चढ्दै उकालो यो,चाल्छु पाईला खुसीले, पन्र्छाई कठिनाई त्यो...
Tweets by @bhabasagar
यसरी फँसाउँछन् विज्ञापनले तपाईँलाई, विज्ञापनबाट जनता ठग्ने चार उपाय
Safal Ghimire (सफल घिमिरे )
BBC Nepali Drama
@bhabasagar. Simple theme. Powered by Blogger.